एक प्रेरण कुकर र अवरक्त कुकर बीचको भिन्नता
इन्फ्रारेड कुकरको कार्य सिद्धान्त: तताउने फर्नेस कोर (निकेल-क्रोमियम धातु ताप शरीर) पछि, यो इन्फ्रारेड किरणको नजिक उच्च कुशल बन्छ। माइक्रोक्रिस्टलाइन सतह प्लेटको कार्यको माध्यमबाट, उच्च प्रभावकारी दूर अवरक्त किरण उत्पन्न हुन्छ। आगो लाइन सिधा माथि छ, र t ...
चीनले १ 1980 s० को दशकमा इन्डक्शन कुकर उत्पादन गर्न शुरू गर्यो, करीव years० बर्षको विकास पछि, इन्डक्शन कुकर उद्योगले विकासको प्रवृत्तिलाई तिव्र बनाउँदैछ, इन्डक्शन कुकरले जनताको जीवनमा बढी र बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै छ। २०० 2005 मा, चीनको प्रेरण कुकर उद्योगको वृद्धि भयो रैप ...
भान्साकोठामा, इन्डक्शन कुकर भान्साका सामानहरू मध्ये एक हो जुन धेरै सामान्य छ। तर इन्डक्शन कुकरको वर्गीकरणको लागि तपाईं एक एक गरेर स्पष्ट हुनुहुन्छ? हाम्रो साधारण इन्डक्शन कुकर के हो? निम्न लेखले इन्डक्शन कुकरको वर्गीकरण विवरणको बारेमा वर्णन गर्दछ, होशियार! एकॉर्ड ...
२०१ 2014 मा, आमोरले भाँचिएको कुकरको कारणको सारांश प्रस्तुत गर्‍यो र गुणस्तर स्थिरता बढाइरहेको थियो। २०१ 2016 मा, आमोरले technique 48 टेक्नीक प्याटेन्ट लागू गर्यो। २०२० मा, अमोरले DC सौर प्रेरण कुकर र सौर इन्फ्रारेड कुकरको नवीनता ल्याएको छ। कम्पनी गतिविधि प्रत्येक वर्ष दुई आउटरीच गतिविधिहरू हुन्छन्। आमोरले प्रो ...